Trivia Crack Kingdoms Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အသေးအဖွဲ Crack နိုင်ငံ
အသေးအဖွဲ Crack နိုင်ငံ APK ကို
ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီစီးရီးထဲကနေ, အားကစားနှင့်သမိုင်းသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စာအုပ်များမှ: သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဆိုခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသေးအဖွဲကစားဖန်တီး! နိုငျငံတျောသညျ '' လိုင်းများအကြားစိတျကူးအသိပညာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုလယ်ကိုရှာပါ။ ကနေရှေးခယျြဖို့ 150K ရွေးချယ်စရာထက်ပိုရှိတယ်,
အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရိုးရှင်းတဲ့များမှာ: ဒါဟာ9သေတ္တာများအစုတခုနှင့်အတူစတင်သည်။ သူတို့ကို၌, သင်စမ်းသပ်ဖို့သင့်အသိပညာချပြီးအားဖြင့်နိုငျငံတျောတလျှောက်လုံးအောင်မြင်မှုတွေသော့ဖွင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမေးခွန်းများကို, စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အံ့သြဖွယ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တစ် trivia Pick မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနှင့်ဘုံ၏အခြားနေထိုင်သူ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်မတိုင်မီဘုရင်ကအဲလက်စ်ကိုရှာဖွေ!
ဂိမ်းရဲ့ features တချို့ကိုခံစားကြည့်ပါ:
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစိန်ခေါ်သို့မဟုတ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျပန်းအသုံးပြုသူများနှင့်ကစားရန်သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ဝင်ပါ! အခြားအပရိတ်သတ်တွေ app ကိုဖွင့်ချက်တင်တွေနဲ့ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ထို့ထက် ပို. ပေးပို့ခြင်းနှင့်သင်၏ဘုံအကျိုးစီးပွားအပေါ်ဘွန်း!
သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီး trivia channel များကို Create! သငျသညျဟော်ကီ၏ပန်ကာရှိပါသလား အဲဒီအကြောင်းတစ်ရုပ်သံလိုင်းလုပ်ပါ။ သင်တစ်ဦးမက္ကဆီကန်အစားအစာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသလား ကျနော်တို့ကအစားအသောက်ရုပ်သံလိုင်းသုံးလို့ရတယ်! သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမူးရူး-စောင့်ကြည့်နေတဲ့စီးရီးကိုရပ်တန့်မရနိုင်မလား? ဒီတစ်ခါလည်းသင်ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ဒေသအပေါ်သူတို့ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာ!
ပျော်စရာနဲ့ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုရှာဖွေသေတ္တာကိုဖွင့်! တစ်ခုချင်းစီကိုစိန်ခေါ်မှုတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစားအဘို့အသငျသညျကို set up ပါလိမ့်မယ်:
ဘုရင်မကြီး: သင်၏ခြေထောက်ပေါ်အမြန် Be! အထူးဆုရရှိရန် 30 စက္ကန့်အတွင်းကိုမှန်ကန်စွာငါးခုမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, ဒတ်ခ်ျ, ကာတာလ, ရုရှ, ဘှ, ဆှီဒငျ, ဖင်လန်, ဒိန်းမတ်, ဂရိ, တူရကီ, ဂျပန်, ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်: 18 ဘာသာစကားများဒေသတွင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရယူပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို join လာ. ကြည့် သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူနှင့်သင်ကိုယ်တိုင် trivia ပြည်၌ရှင်ဘုရင်အတျောမူ။ ,
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာအသေးအဖွဲ Crack နိုင်ငံအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာနိုင်သည် http://triviacrackkingdoms.com/
သင်သည် app တွေနဲ့ဒုက္ခရှိခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်သံသယရှိနေလျှင်သင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နိုင်သည်
87.98 ကို MB